Maxay Yihiin Daraasadaha Cilmi Baarista Caafimaadka (Clinical Trial)? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — March 29, 2020
Waxaan maqalnaa marwaliba “cilmi baaris lasameeyay ayaa lagu ogaaday. Tusaalle in laga helo caafimaad fiican hurdada siddeedda saacadood laseexdo habeenkii Iyo kuwa kale oobadan?
Ma’isweydiinnay sidee cilmi baaristaas loo sameeyay? Yaa Sameeyay? Yaasa kaqeyb qaatay?
Ugu horreyn Tijaabooyinka caafimaadku waa baaritaano cilmi baaris oo ay ardaydu ama qabiirada caafimaadka si mutadawacnimo ah u baaraan ama usameeyaan, iyada oo laraadinaayo daaweynta cusub ee looga hortagi karo waxyeelada, laguna ogaado ama loo maareeyo cuduro kala duwan ama xaaladaha caafimaadka ee ubbaahan wax kaqabashada.
Tusaale hadda adduunka waxaa kasocda karoona Fayrus (Covid19)! Waxaa la’isweydiinayaa su’aalo badan oo ka-kala imaanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada sida:
Cudurkaan Maxaa sababay?
Da’dee ayuu ubadanyahay ee uu ku dhacaa cudurkaan?
Daawadee ayaan ku daaweyn karnaa?
Tallaal noocee ah ayaan usoosaarnaa?
Maxay tahay sababta dadka qaar ey uga bogsanayaan qaarna ey ugu dhimanayaan?
Cudurkaan waxaa la’iska weydiin karaa inkabadan 100 su’aalood, Su’aalahaas aan isweydiinnay si’aan jawaabahooda u helno waxa aan ubbaahannahay Cilmi Baaris!
Cilmi baaristaas waxaa kaqeyb qaadan kara guud ahaan bulshada ku nool deegaanka aan cilmi barista kasameyneyno, iyada oo loo eegayo habka aan rabno in ey cilmibaaristeenna noqoto sida sheybaar ama wareysi.
Nuucyada Cilmibaarista Aan u Sameyn Karno:
In aan isbar-bar dhigno natiijada aan filan karno cilmi barista kaddib iyo xogaha aan heysanno.
In aan cilmi baaris ku sameyno kaliya qaabka looga hortagi karo.
In cilmi baaris aan ku sameyno qaabka ugu fudud ee lagu ogaan karo cudurka iyo noocyo kale oo badan.
Sidee Ayay Ardaydu Uga Qeyb Qaadan Karaan Cilmi Baaristaan?
Maadaama dhowr su’aalood lagu sameynayo cilmi barista, ardayda iyo qubarada caafimaadka waxa ey isku qeybin karaan koox koox, iyada oo ey koox walibaa su’aal gooni ah baaritaan ku sameynayaan. Waxaase muhiim ah in lahelo xarun cilmi baaris, Jaamacad ama Cusbitaal mas’uul kanoqda cilmi barista si natiijada loogu kalsoonaan karo.
Marxalad kasta oo cilmi baaris ah waxaa loogu talagalay inay ka jawaabto su’aalaha qaarkood, iyada oo la qaadayo tillaabooyin muhiim ah si loo ilaaliyo dadka kaqeyb galaya. … Tijaabooyinka caafimaad waxaa loo isticmaalaa si loo go’aamiyo dawooyinka cusub ama baaritaanada cusub in ey Qatar ka’imaanayn isticmaalkooda.
Ugu danbeyntii waxaa loo baahanyahay dukumiinti caddeyn u ah baaritaanada lasameeyay iyo natiijada soo baxdayba si loo hubiyo bad qabka tallaabooyinka lasoosaaray, oo bulshada eysan ugu gudbin wax dhibaato ah. Si’aan usii fududeynno hadalkeenna aan tusaale kabixinno – kawaran haddii aan faafinno in dadka Madowga ah uusan kufidayn ama uusan kufaafeyn cudurka karoonaha, iyada oo naloo xilsaaray in aan kajawaabno su’aasha ah Yaa unugul cudurkaan karoonaha marki loo eego dadka madowga ama caddaanka ah?!
Dabcan aqristow waad garan kartaa natiijada aan gudbinnay saameynta ey yeelan karto, cinwaankeennana halkaas ayaan ku simeynaa.
F.G waxa aan kugula talin lahaa in aad baaritaan dheeri ah kusii sameyso cinwaankaan si’aad cilmi badan uga hesho
Tags: Maxay Yihiin Daraasadaha Cilmi Baarista Caafimaadka (Clinical Trial)?
Next post Wax Ka Baro Cudurkaan Dunida Saamaynta Ba'an Ka Gaystay ee Korona Fayrus *COVID-19
Previous post Qaadka iyo Saamaynta uu Leeyahay